Dawladda Federaalka oo Somaliland ku dhaliishay Joojinta Qaxootiga Soomaaliyeed ee Imaanaya Berbera | SAHAN ONLINE
Dawladda Federaalka oo Somaliland ku dhaliishay Joojinta Qaxootiga Soomaaliyeed ee Imaanaya Berbera
Cabdisalaan Hadliye Cumar
Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa sheegay iney wax aan la qaadan karin tacadiga ay la kulamayaan dadka Soomaaliyeed ee kasoo baxsanaya dagaalada Yemen ee imaanayey Somaliland.
Cabdisalaan Hadliye Cumar oo la hadlay Idaacada BBCda ayaa sheegay iney dadka Soomaalida ah xaq u leeyihiin in dalkooda meeshey ka doonaan tegi karaan kuna noolaan karaan.
Mar la weydiiyey in Somaliland xaq u leedahay in ammaankeeda ka difaacato kooxaha mayalka adag ee looga cabsi-qabo iney kusoo dhex dhuuntan Qaxootiga ka imaanaya Yemen ayaa Wasiirku sheegay in taas xaq u leeyihiin balse aan la ogolaan karin dad Soomaali ah dhulkooda in loo diido.
Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar ayaa sheegay in wixii dhaqaale ee loogu talagalay Taakuleynta dadka ka imaanaya dalka Yemen ay gaarsiinayaan meelaha ay imanayaan sida Bosaso iyo Berbera.
Go’aanka ay Somaliland ku gaartay joojinta dadkan ayaa hadda shalay waxaa gaaray Markab siday qaxooti ka badan 200 qof kuwaas oo si wanaagsan loo dejiyey haddana madaxda Somaliland ayaa weli ku taagan go’aankoodii joojinta dadkan.
Shacabka ku dhaqan magaaladda Berbera ayaa si weyn uga xumaaday in dad maato ah lagu celiyo Markab ay kaga soo carareen dagaalada Yemen iyagoona ku baaqay in dadka lasoo dhaweeyo.